त्यहाँ कुनै पनि प्रबन्धकको दिन छ
प्रबन्धक रोजगार वास्तविकता मा पहिलो नजर सरल मा, तर यो एउटा गम्भीर र जिम्मेवार छ। व्यवस्थापक - यातायात र विमान साइटहरु सचिव एक प्रकारको। त्यो कसरी काम प्रबन्धक, कम्पनी को राम्रो-जा निर्भर छ।
त्यहाँ एक पेशेवर छुट्टी नियन्त्रक छ?
एक पेशेवर - धेरै मानिसहरू एक विशेष पेशा मा काम, अर्को छुट्टी छ। चाहे त्यो हो Metallurgist दिन को दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता व्यापार दिन। वस्तुतः सबै व्यापार मिति चिन्ह लगाइयो। त्यहाँ नियन्त्रक को व्यावसायिक छुट्टी दिन को एक सूची छ? पछि सबै ग्राहकहरु संग, ग्राहकहरु संग प्रत्यक्ष काम गर्ने मान्छे - आफ्नो क्षेत्रमा वास्तविक व्यवसायीक। यो धेरै महत्त्वपूर्ण भावनात्मक शान्त, बलियो नसाहरू र राम्रो स्मृति छ। यो ग्राहक कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्न चाहे निर्धारण गर्नेछ व्यवस्थापक थियो। Dispatchers फरक हो: टैक्सी मा, हवाई यातायात नियन्त्रक, उद्यमी मा नियन्त्रक, ढुवानी कम्पनी (कार्गो)। यी एकाइहरूको प्रत्येक यसको दिन प्रबन्धक छ।
छुट्टी ट्याक्सी dispatchers र परिवहन कम्पनीहरु गर्दा मनाइन्छ
प्रबन्धक ट्रकिंग कम्पनीहरु र ट्याक्सी को एक विशेष भूमिका खेल्छ उद्यमी को काम। एक केटी वा केटा ग्राहक संग कुराकानी नेतृत्व कसरी, तिनीहरूले गुणात्मक को arising समस्या (माल मा समय बुझाइएको छैन वा ट्याक्सी लेट छ), यो एक पुरा को रूप कम्पनी बारे ग्राहकको राय निर्भर समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेशा मा मजदुर त्यहाँ अन्य अन्त पनि एक वास्तविक व्यक्ति त्यो विचार नगर्ने मान्छे हो किनभने, भावनात्मक अनुभव गर्न susceptible अक्सर छन्। , अशिष्ट अपमानजनक हुन थाले। कुनै पनि मामला मा प्रबन्धक, ग्राहक आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन् कुनै पनि अवस्थामा तपाईं फोनमा मुस्कान गर्न आवश्यक र अवरोधहरू बिना बोल्न। पश्चिमी देशहरूमा यो काम बारे गम्भीर छन्, त्यहाँ सामान्यतया सालाना दिन ट्याक्सी dispatcher मनाइन्छ। Dispatchers ट्रकिंग कम्पनीहरु परंपरागत मा परिवहन कार्यकर्ता दिन आफ्नो छुट्टी मनाउन। त्यहाँ रूस मा कुनै पनि प्रबन्धकको दिन छ? जब उहाँ भन्नुहुन्छ? हामी मा ट्याक्सी dispatchers बधाई निर्णय ड्राइभर दिन (अक्टोबर अन्तिम आइतवार)। अर्को पटक, यो दिन कार कारण, तपाईंले आदेश हुनेछ जसले केटी बधाई गर्न नबिर्स।
रूस मा दिन प्रबन्धक। जब हावा मा?
जो छ लाख भन्दा बढी दैनिक जीवन सुम्पियो छ? एयर ट्राफिक नियन्त्रक। कारण जब अन्य देशहरूमा प्रबन्धकहरू काम एकाग्रता, साक्षरता, एक विशाल जिम्मेवारी, व्यावसायिक एकता गर्न, आकाश यात्रु र कार्गो लागि अर्ब पटक सुरक्षित छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिवस प्रबन्धक उड्डयन अक्टोबर को बीसौँ मनाइन्छ। यो दिन एयर ट्राफिक कंट्रोलर्स को अन्तर्राष्ट्रिय संघ। संघ को महासंघ एम्स्टर्डम, अक्टोबर 20, 1961 मा स्थापित भएको थियो। त्यतिबेलादेखि दिन प्रबन्धक उड्डयन। यी मानिसहरू साँच्चै किनभने आफ्नो काम को लागि धन्यवाद, मान्छे सजिलै एक विमान मा प्राप्त गर्न सक्छन्, आफ्नो विशेष दिन योग्य हुनुहुन्छ। पक्कै पनि, र यो हुन्छ misfortune, कहिलेकाहीं यो हवाई यातायात नियन्त्रक को दोष हो। तर नियम, कुनै एक गल्तीबाट प्रतिरक्षा, जो पेशामा उहाँले काम छ।
दिन रूस मा आपराधिक अनुसन्धान विभाग कार्यकर्ता को
तपाईं प्रकृति मा एक बच्चाको पार्टी व्यवस्थित गर्न के आवश्यक छ
कसरी घर cheaply आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्न, छिटो र स्वादिष्ट?
केक कसरी खाना पकाउन र मेरो आमाको जन्मदिन राख्न
डिसेम्बर 12 रूस मा एक छुट्टी? उत्पादन एक दिन वा काम छ?
कथा परिदृश्य आज र एक पटक
लेख: "घर को inviolability उल्लङ्घनमा"। टिप्पणी र सजाय: एक वासस्थान (अपराधी कोड) मा प्रवेश
शेविंग पछि दाह
घरेलू जनावरहरूको परजीवी।
स्वर्गदूतको दिन कस्तो दिन हो? यसलाई कसरी मनाउने?
अल्ट्रासोनिक SMAS-उठाने: समीक्षा
मताधिकार बेकरी "को tandoor को रोटी": कारोबार स्वामित्व गर्ने क्षमता
चिकन छातीको नाजुक र रसदार रोल: नुस्खा
क्रिसमस गहने: कसरी हिमपात मनका बनाउन
मुख अल्सर। उपचार को परम्परागत विधिहरू धेरै प्रभावकारी हुन्छ।